माथेमा प्रतिवेदनका सुझाव कार्यान्‍वयन गर्न सरकार सहमत-NepalKanoon.com
माथेमा प्रतिवेदनका सुझाव कार्यान्‍वयन गर्न सरकार सहमत
भदौ १९, काठमाण्डौ । चिकित्सा क्षेत्रमा सुधार गर्नका लागि विगत १२ दिनदेखि अनशन बसिरहेका प्राध्यापक डा. गोविन्द केसीका मागप्रति सरकार लचिलो हुदै गएको छ । शुक्रबार मध्यरातसम्म गरेको वार्ता सकारात्मक दिशातर्फ अघि बढेकोले । यही गतिमा वार्ता प्रक्रिया अगाडि बढे सहमति भई डा। केसी अनशन तोड्ने सम्भावना बन्दै गएको छ ।
शुक्रबार मध्यरात सरकारले केही सकारात्मक कुरा डा. केसीले बताए, तर मेरो माग ठोस रूपमा सम्बोधन नभएसम्म आफुले आन्दोलन नछाड्ने उनले बताए ।
शुक्रबार राति करिब पाँच घन्टा वार्तामा बसेका केसी समर्थक एक चिकित्सकका अनुसार सरकार माथेमा प्रतिवेदनका महत्वपूर्ण सुझाव कार्यान्वयन गर्न सहमत भएको र डा. केसीसँग गरिएका अन्य सम्झौताहरुबारे पनि विस्तृत रूपमा छलफल गर्न शनिबार पुन वार्ता गर्ने टुंगोमा पुगेको छ ।